Col. Cismaan Cilmi Guure “Cukaash” oo wali si cadaalad daraa ku xiran, iyo baaq laga soo saarayHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Col. Cismaan Cilmi Guure “Cukaash” oo wali si cadaalad daraa ku xiran, iyo baaq laga soo saaray
Muqdisho; HN- Waxaa weli si sharci daraa xabsiga magaalada Muqdisho ugu xiran dhibane col. Cismaan Cilmi Guure, Amarka lagu xiray ayaa la sheegay inuu si toosa u bixiyey Taliyaha Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed Gen.Daahir Aadan Cilmi “indha qarshe” Col. Cukaash ayaa eedsaday gabay uu tiriyey kaasoo uu uga hadlayay daryeelxumada heysata ciidanka xooga dalka Somaliyeed isagoona si toosa u weeraray taliyaha xooga dalka Gen. Indho qarshe, intaa wixii ka dambeey Dhibane Cukaash wuxuu ku jiray xabsi.
Hadaba qoraal aay soo saareen bulshada reer Hiiraan gaar ahaan kuwooda qurbaha waxay madaxda dowlada ka dalbadeen in si deg deg lagu sii daayo Col. Cukaash, iyo Saraakiisha iyo askarta kale ee sharci daradda lagu soo xirey.
Waxaan ka digeynaa in xabsi lagu sii hayo dad aan waxba galabsan, ahaana kuwii cadowga idinka difaacayey. Maaha wax loo dulqaadan karo inaad iska xirataan wiilal dhaxanta u taagan difaacida qaranka Soomaaliya.
Col. Cukaash oo xabsiga ugu jira Gen. Indho Qarshe.
Waxaa wax lala yaabo ah in Indha Qarshe uu ka xayuubiyey garaadihii G/dhaxe Cukaash, isagoo yiri meel lagu dalacsiiyey ma garanayo, waxaana heynaa cadeymo iyo wareegtadii ay soo saareen 2 madaxweyne oo kala ah Abdullahi Yusus Axmed & Shiiq Shariif Shiiq Axmed.
Dhanka kale waxaa la yiri Yaxaas ciil loo qabo waxaa loo tumaa Wabiga oo micnaheeda yahay General Indha Qarshe wuxuu xabsiga u taxaabay 3 Sargaal iyo 4 askari oo Kornel Cukaash isku heyb yihiin, isagoo ciil uu u qabo Col. Cukaash mar marsiiyo ka dhigtay in 2 askari oo Liido kala goostay gaari una galay Al-shabaab uu ku eedeeyey askarta fakatay waxaad tihiin isku heyb.
Waxaan ognahay maalin walbo in Muqdisho ay ka dhacaan falal ka dhan ah bin,aadanimadda iyo amniga, waxaana baddanaa falalkaas fuliya askar si toos ah ula shaqeysta ururka Alshabaab, loomana xiro askar kale oo isku heyb ay yihiin.
Hadaba waxaa cad oo aan u jeednaa gardaro garab og iney tahay falka uu ku kacayo Indha Qarshe. Waxaana dhacday in Indha Qarshe laftigiisa ay ku dhacday cadaalad darada uu sameeyey, isagoo lagu helay musuq maasuq iyo inuu wax isdaba mariyey waxaanala og yahay in Indha Qarshe iyo ninka qasnajiga u ah la weydiiyey su,aalo loona sheegay ineysan ka dhoofi karin dalka, taasina waa nabsigii uu ka galay dhibane Col. Cukaash.
Dhageyo Gabeyga uu tiriyey Col. Cukaash.
Hadaba hoos ka aqriso taariiqda dhibane Col. Cismaan Cukaash.
G/ dhaxe Cismaan Cilmi Guure wuxuu ku dhashay magaaladda Beergadiid ee gobalka Hiiraan, wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1969-kii.
Gaashaanle Dhaxe Cukaash waxbarashadiisa hoose & Sare wuxuu ku qaatay gobalka Hiiraan iyo gobalka Banaadir.
G/Sare Cukaash wuxuu ku biiray ciidanka qaranka Soomaaliyeed, wuxuuna tabar kusoo qaatay dalalka Itoobiya & Jabuuti.
Sanadka markuu ahaa 2000-2004 wuxuu ka mid ahaa ilaalada qaaska (F/LE) Madaxweyne Cabdi Qaasin Salaad.
Sanadka markuu ahaa 2005-2007 Kornel Cukaash wuxuu noqday taliyaha ilaalada qaaska ah ee ra,isal wasaare Cali Maxamed Geedi.
27.11.2007 Waxaa loo dalacsiiyey Dhame Waxaana lagu dalacsiiyey wareegto uusoo saaray Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed.
5.5.2009 Kornel Cukaash waxaa loo dalacsiiyey Gaashaanle, waxaana lagu dalacsiiyey wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne Shariif Shiiq Axmed.
Sanadka markuu ahaa 2009-2012 Cukaash waxaa loo doortay madaxa amniga ee Madaxweynaha iyo taliyaha amniga madaxtooyadda Shiiq Shariif Sh. Axmed.
2012 G/dhaxe Cukaash waxaa loo dalacsiiyey G/dhaxe, waxaana lagu dalacsiiyey wareegto uusoo saaray Madaxweyne Shariif Shiiq Axmed.
2012-2013 G/dhaxe Cukaash waxaa loo xushay madaxa amniga ee Madaxtooyada Madaxweyne Xassan Shiiq.
Ogoosto 2013 waxaa loo doortay taliye urur oo ka howl gala Shabeelada hoose.
April 2014 G/dhaxe Cukaash wuxuu iskiis u codsaday in laga wareejiyo taliyaha urur ee shabeelada hoose, waana laga aqbalay codsigiisa, kadib wuxuu ahaa sargaal ka tirsan ururka taliska guud ee Fila Baydhabo.
15.10.2014 G/dhaxe Cukaash iyadoon looga yeerin xafiiska laga xukumo, ayaa waxaa weerar qorsheysan kusoo qaaday ciidamo ku hubeysan hubka nuucyadiisa kala duwan iyo gawaarida dagaalka, waxayna si arxan daro afduub ugu geysteen G/dhaxe Cukaash iyagoo ula dhaqaaqay xabsiga dhaxe ee Muqdisho.
G/dhaxe Cukaash waxaa loo afduubay gabay aan la hubin inuu tiriyey isaga, maadaama uu magaciisa sheegin, codkaaga ayaan aqoonsanay darteed ayaa loo jajuubay xabsina uu ku muteystay.
G/dhaxe Cukaash iyadoon wax wareysi ah laga qaadin ayaa waxaa loo taxaabay xabsiga dhaxe ee Muqdisho, waxaana maxkamadda la hor keenay 2 bil iyo 3 maalin kadib. Indha Qarshe ma uusan soo xaadirin maalintii maxkamadda, laakiin wuxuu sheegay inuu heysto 2 marqaati oo lakala dhaho general Qaafoow oo ah taliyaha qeybta Koowaad E12 April iyo Marqaatiga labaad oo lagu magacaabo Kornel Xassan Xaashi oo ah taliyaha guutada Shanaad.
Waxaa xussid mudan in saraakiishii uu Indha Qarshe u qabsaday Marqaatiga ay la yaabeen been abuurka laga sameeyey, waxayna yiraahdeen annaga cid aan marqaati u nahay ma jirto mana dooneyno in nalaga been abuuro.
Dhageysigii marqaatiyeyaasha kadib xeer ilaaliyaha wuxuu sheegay in maxkamadda aysan kiiskan gali Karin, arinkana uu yahay mid uu madaxweynaha awoodeeda leeyahay.
Sida uu qabo xeerka ciidamadda qaranka taliyaha ciidanka awoodiisa waxay tahay inuu xiri karo askariga muddo 40-42 maalin inta u dhaxeysa, laakiin xeerka qabtay Kornel Cukaash maaha mid waafaqsan sharciga u yaalo ciidanka qaranka, waxaana halkaas ka muuqda amar ku taagleyn iyo bahdilaad aan loo marin sharciga. G/dhaxe Cukaash ilaa iyo hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga dhaxe ee Muqdisho. Maalinba maalinka ka dambeeya waxaa loo sheegaa arinkiisa inuu Madaxweynaha galayo, ilaa iyo hadana Madaxweynaha dalka Mudane Xassan Shiiq Maxmuud wuu iska indho tirayaa xariga G/ dhaxe Cukaash.